भ्रष्टाचार विसंगति घर घरमा पुगिसक्यो | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
भ्रष्टाचार विसंगति घर घरमा पुगिसक्यो
अब इमानदारिताले भ्रष्टाचार कुनै हालमा रोकिनेवाला लक्षण देखिदैन बरु बढोत्तरी हुने संकेतहरु हामी संग मौजुद छन् । जो च्रष्टाचार रोक्ने कुरा गर्छ उहीबाट बढी भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ । यदि भ्रष्टाचार रोक्नै पर्ने हो भने उच्च पदस्त वर्ग र सर्व–साधारण जनता सित सौदा गर्नुपर्छ ताकि जनताले पनि भ्रष्टाचारी भ्रष्टहरुलाई बढावा नदेउन । यदि जनताले भइरहेको दुःखमा बरु त्यति अरु दुःख थपिन गएर पनि सहन गर्न सक्यो भने भ्रष्टाचारमा केही कमी आउन सक्छ । भ्रष्टाचारमा कमि ल्याउन सरकारका पदाधिकारी जनता स्वयं जनप्रतिनिधिले बच्नु पर्दछ । जब आफुले चोखो रहन सकिन्छ अनि मात्र ऐन नियमको पालना गर्न सकिन्छ र पालना हुनासाथ सबै विकृतिहरुमा कमि आउँछ ।
भ्रष्टाचार ढिलासुस्तीले अब शिक्षा क्षेत्रलाई समेत जगेडी सकेको छ । विश्व विद्यलायहरुबाट सबै किसिमका भ्रष्टाचारहरु मौलाएका छन् । आफु संलग्न भएको पार्टी समर्थक द्वारा विश्व विद्यालय क्याम्पसमा ताला लगाउन लगाउँछन् अनि काम नगरेका दिनको पनि तलब मात्र खाने होइनन् कि आफ्ना व्यापारी ग्राहकहरुको भुक्तानी दिनुपर्ने रकममा पनि ठूलो रकम कमिसन खान खोजेका छन् ।
यदि रकम दिएन भने कयौं वर्ष सम्म भुक्तानी रोकेका प्रमाण हामी सामु छन् । विश्व विद्यालय नै भ्रष्ट छन् भने अरु संघ–संस्थाहरुको हालत के होला ? घुस लिने र दिने दुबै देशका शत्रु हुन् भनि पृथ्वीनारायण शाहले गरेका उद्गारबाट पनि थाहा हुन्छ कि भ्रष्टाचारले नेपालमा जरा गाडेको करिब २÷३ सय वर्ष पुगिसकेको अनुमान लगाउन सकिन्छ भने सरकारी कार्यालयहरुले समयमा काम नगरी झुल्याई रहने प्रचलन पनि पुरानो नै रहेछ । त्यसको पुष्टि भानुभक्त आचार्यका उद्गारबाट भएका छन् । आज भोली भन्दै सेवाग्राहीका काममा ढिलासुस्ती गर्नु भ्रष्टाचारको द्योतक हो ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको घेरा केही साघँुरो भएको समय २०१७ देखि २०२७ तथा २०२७ देखि २०४६ सम्म भ्रष्टाचार सीमित घेरा भित्र थियो र डराएको पनि थियो । भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्ने कोसिस २०४७ देखि २०५२ सम्म ग¥यो र २०५२ देखि हरेक बहानामा भ्रष्टाचारमा अतुलनिय बढोत्तरी भयो । २०५२ पछि त झन् लोकतन्त्र र माओवादीको नाममा भ्रष्टाचारले नयाँ मोड लियो ।
सरकारले माओवादी नियन्त्रण र माओवादीले आक्रमणको संज्ञा दिदै वैधानिक रुपमा सरकारले देशको धन खर्च ग¥यो भने अवैध रुपले जनताको ढुकुटी बैंकहरु माथि हमला गरी बैंकहरु माओवादी लुटाहामा परे । बैंक लुटिने बेला बैंक कर्मचारी चोखा थिएन र हुन् भन्ने आधार छैन । द्वन्दकालका १० वर्षमा र त्यसपछि पनि देशको ढुकुटी हरेक बहानाबाजीमा रित्तिरहेको छ मानौं त्यो सम्पत्ति सम्पूर्ण नागरिकहरुको साझा नभएर जो पदमा गए जसलाई हिनामिना गर्ने हिम्मत छ उसैको निजि हो कि भनेझैं भइरहेको भएपनि सभासदहरु टुलुटुलु हेर्दै सहभागिता जनाई रहेका छन् ।
अरबौ होइन खरबौ रकमको साझा सम्पत्ति माथि नगर विकासका राजनीतिक पदाधिकारीहरुले आफु खुसी गरेको कुरा सरकारलाई थाहा भएको भएपनि हामी भन्न सक्दछौं कि सहभागिता सरकारका पदाधिकारीहरुको पनि रहेको छ कारण र प्रमाण खोज्ने हो भने कारवाही नहुनु नगर्नु नै साझेदारी हो भनेर हामी भन्न सक्छौं ।
नयाँ कुरा गर्दा निर्वाचनको समय आउँदैछ । राजनीतिक पार्टीहरुले चुनाव खर्च जुटाउन सक्नेलाई टिकट दिने आट पहिले झैं ग¥यो भने झन् नराम्रो प्रतिक्रिया आउनेछ र शंका पनि जनमानसमा गरिएकै छ । निर्वाचनको समयमा व्यापारी उद्योगीहरुबाट लिएको चन्दा रकम नेपाली जनता कै बोझ भइरहेको छ । जीवनस्तर महंगो हुदै गई रहेको छ । आयातित सामान जस्तो सवारी साधन तथा त्यस्तै अन्य एकद्वार प्रणाली द्वारा भित्रिएको सामानको मुल्यमा ठूलो अन्तर छ । रु. १० मा पाइने सामानको ३० रुपैया परल मुल्य भएको छ ।
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुबै रुपबाट भ्रष्टाचारले स्थान पाएको छ । त्यसकारण भ्रष्टाचारमा ठूलो बल रहेको छ । वैध र अवैध तरिकाले भ्रष्टाचार चलेको छ । ठूला हुन् भन्नेहरुबाट भने योजनाबद्ध रुपबाट भ्रष्टाचार भएको छ सो कुराको जानकारीबाट कोही पनि बञ्चित छैनन् । भ्रष्टाचारका कुरा गर्दा आफ्ना नागरिकलाई विदेशीहरुको घरेलु तथा व्यापारिक नोकरका रुपमा विदेश पठाउँदा समेत दलाल मार्फत भ्रष्टाचार भइरहेको छ । सामन्तहरु धेरै अगाडी बढिसके । पैसा पनि घरखेत विक्री गराई असुल गर्ने अनि नोकरपनि बनाउने त्यस्तो त अव्राहम लिङ्कनको पालामा पनि थिएन ।
अमेरिकाले दक्षिण अफ्रिकाबाट हप्सी जातिलाई उद्योगमा समेत काम गराउन लगेर जान्थे । जान आउन बाटाको सम्पूर्ण खर्च आफै व्यहार्थे भने अचेल नोकर बनाउने कम्पनीहरुले आफू एक रुपैया पनि तिर्दैन जाने खर्च आफै तिर्नुपर्छ र दलाललाई पनि नोकर बनाई दिएबापत दिनुपर्छ । दलालले कम्पनीबाट खाने दलाली रकम समेतको हिसाब गर्ने हो भने हामी विदेशीका हलिया भएका छौं । हलियामुक्ति हुने हौ कि होइनौं समयले बताउनेछ तर नेपालमा नेपालीको घरमा हलिया रहेकाहरुले भने हलियाबाट मुक्ति पाई सकेको स्मरण समेत रहोस् ।
← लोक कल्याणकारी शासन व्यवस्थामा प्रशासनको भुमिका
प्रदेश नं. ७ को सर्वस्वीकार्य नाम →